အထိနာနတေဲ့ အမရေိကနျအတှကျ အိုဘားမားပေးလိုကျတဲ့ အကွံ
အမရေိကနျမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရမှု ပိုမိုမွငျ့မားလာနတောပါ။ ဒီလို ဗိုငျးရပျဈ အန်တရယျကို မထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ အခွေ အနမှောပဲ အမရေိကနျရဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှဟောလညျး ဆကျတိုကျကဆြငျးနတောပါ။ လကျရှိ အမရေိကနျ ဗိုငျးရပျဈအ ခွအေနနေဲ့ပကျသကျလို့ အရငျ သမ်မတဟောငျး ဘားရကျဈ အိုဘားမားက ကွာသပတေးနကေ့လုပျခဲ့တဲ့Bloomberg’s group Virtual Meetingမှာ မွို့တျောဝနျနဲ့အဖှဲ့ကိုအကွံအခြို့နဲ့သတိပေးစကားတခြို့ပေးခဲ့ပါတယျ။
အခုလိုမိုးထဲရထေဲ ရောကျနတေဲ့အခြိနျမှာ တိုငျးပွညျအတှကျ အရေးကွီးဆုံးက ခေါငျးဆောငျပိုငျးတှထေဲက သတငျးမှားတှေ ဖွနျ့နိုငျတယျဆိုတာပါ။ ဒီသတငျးမှားအခကျြအလကျမှားတှဟော ခေါငျးဆောငျးပိုငျးတှသောမကဘယျသူကမဆိုပွနျ့စနေိုငျပွီး ဒါကိုထိနျးခြုပျဖို့လညျးတျောတျောခကျခဲနတောပါ။ ဒီသတငျးမှားတှကွေောငျ့အခွအေနပေိုဆိုးသှားမှာကိုအိုဘားမားစိုးရိမျနပေုံရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သမ်မတဟောငျးအိုဘားမားက လကျရှိအခွအေနတှေနေဲ့ပကျသကျပွီး
(၂) အခွအေနတှေကေို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးပွောဖို့
(၄)ရှမှေ့ာဆကျဖွဈနိုငျမယျ့အရာတှကေို လူတှကေိုစာနာစိတျနဲ့ပွောပွထားဖို့”လိုတယျလို့ အစညျးအဝေးတဈခုမှာ မွို့တျောဝနျနဲ့အဖှဲ့ကို အကွံပေးခဲ့ပါတယျ။
WHOက ကမ်ဘာ့ကပျအဖွဈကွငွောခဲ့တာတောငျ အမရေိကနျဟာ ဒီဗိုငျးရပျဈကို လြော့တှကျပွီး ကွိုတငျပွငျဆငျမှု အားနညျးတယျဆိုတာ လတျတလော အသအေပြောကျနဲ့ကူးစကျနှုနျး အမြားဆုံးဖွဈနတေဲ့ အမရေိကနျအခွအေနကေို ကွညျ့ရငျသိနိုငျပါတယျ။
ဒီလိုအခွအေနတှေကွေောငျ့အိုဘားမားက မွို့တျောဝနျကို အကွံပေးတှနေဲ့ကြှမျးကငျြသူတှမြေားမြားချေါထားဖို့လညျး အကွံ ပေးခဲ့ပါတယျ။ ကြှမျးကငျြသူတှမြေားမြားရှိလေ အရှကျရစရာတှေ နညျးသှားလဖွေဈပွီး တုံပွနျမှုတှကေလညျးပိုကောငျးလာလိမျ့မယျလို့ အိုဘားမားကဆိုပါတယျ။ ဒီစကားတှကေ Bloomberg’s groupရဲ့၎ ကွိမျမွောကျ အစညျးအဝေးမှာ အိုဘားမား ပွောကွားခဲ့တာတှပေါ။ ရှေ့၂ကွိမျမွောကျအစညျးအဝေးမှာတုနျးကလညျး ဘီကလငျတနျနဲ့ ရှေးသမ်မတ George W. Bush တို့လညျးပါဝငျပွီး စကားပွောခဲ့ကွပါသေးတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့လတှကေတညျးက Social Distancingလုပျဖို့ အိုဘားမားကတိုကျတှနျးခဲ့ပမေယျ့ အစိုးရပိုငျးက လေးလေးနကျနကျလုပျဆောငျမှုမရှိတဲ့အတှကျ ပွညျသူတှကေလညျး ပေါ့ပေါ့လြော့လြော့ အပြျောမပကျြ နခေဲ့ကွပါတယျ။ ခုခြိနျထိလညျး လူအုပျစု အုပျစုဆိုတာတှရှေိနတေုနျးပဲဖွဈပါတယျ..
နောကျပွီး သမ်မတဒေါနယျထရမျ့ ကလညျး ဗိုငျးရပျဈကို ထိထိရောကျရောကျ တုံ့ပွနျဖို့ထကျ စီးပှားရေးလှုပျရှားမှုတှေ ပွနျလုပျဖို့စိတျစောပွီးဒါလုပျဖို့ပဲဆန်ဒရှိနတောပါ။ ဒါပမေယျ့အိုဘားမားကတော့ ပွညျသူတှရေဲ့ကနျြးမာရေးကို လေးလေးနကျနကျ ကာကှယျပေးဖို့ အကွံပေးခဲ့ပါတယျ။ အမရေိကနျမှာ လကျရှိအခြိနျထိ ဗိုငျးရပျကူးစကျမှုကို ထိထိရောကျရောကျဟနျ့တားနိုငျခွငျးမရှိပဲ စောငျ့ကွညျ့ခွငျး စဈဆေးခွငျးတှကေို တိုငျးပွညျရဲ့ နရောအားလုံးကို မဖွနျ့ကကျြနိုငျသေးပါဘူး။ အိုဘားမားရဲ့အကွံတှနေဲ့ပကျသကျပွီး ထရမျ့ကလညျး မကမြေနပျဖွဈနပေါတယျ။ မီဒီယာတှကေတော့ အိုဘားမားအကွံတှအေတိုငျး သတငျးမှနျတှစေီးဆငျးဖို့နဲ့ တငျးကွပျတဲ့စညျးမညျြးတှခေဖြို့လိုတယျလို့လညျး ရေးသားကွပါတယျ။
အမရေိကနျမှာ တဈရကျကို လူ တဈထောငျနီးပါး သဆေုံးနတောနဲ့ပကျသကျလို့ အိုဘားမားက”ထရမျ့အစိုးရရဲ့ တဈပတျအတှငျးနာရေးစီးပှားရေးစံနှုနျး”ဆိုတဲ့ ဆောငျးပါးတဈပုဒျကိုတှဈတာမှာ ပွနျတငျထားပွီး ထရမျ့အစိုးရကို တိုကျရိုကျမဝဖေနျပမေယျ့သှယျဝိုကျဝဖေနျတဲ့စကားလုံးတှေ တှဈတာမှာရေးသားခဲ့ပါတယျ။ အခုလို ကရြှုံးမှုတှအေတှကျ ပွညျသူတှအေနနေဲ့အစိုးရကို Vote လုပျကွဖို့နဲ့ ခုလိုဖွဈရတာ WHOရဲ့ ဒီဗိုငျးရပျဈဟာ ကမ်ဘာ့ကပျဆိုတာကို ငွငျးဆနျခဲ့တဲ့သူကွောငျ့ဖွဈတယျလို့ဝဖေနျခဲ့ပါတယျ။ တိုကျရိုကျနာမညျတပျမပွောခဲ့ပါဘူး။
မွို့တျောဝနျကိုပေးခဲ့တဲ့ အိုဘားမားရဲ့မှတျခကျြတှနေဲ့အကွံတှကေ ထရမျ့ထကျစာရငျ မှတျသားစရာကောငျးတယျလို့ဆိုပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့လတှတေညျးက Social Distancingကို အမရေိကနျပွညျသူတှေ စနဈတကလြုပျကွဖို့တိုကျတှနျးခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အမရေိကနျတှကေ ဗိုငျးရပျဈကို လြော့တှကျခဲ့တဲ့ အတှကျ လုပျငနျးပေါငျးမြားစှာပိတျသိမျးခဲ့ရသလို အလုပျလကျမဲ့တှေ သနျးနဲ့ခြီဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ အိုဘားမားကဒီလိုတှေ သတိပေးပမေယျ့ အမရေိကနျဟာ ကူးစကျနှုနျးအမွငျ့ဆုံးနဲ့ တဈရကျကို လူဦးရေ ၉၀၀ကြျောလောကျသဆေုံးနဆေဲပါ။
အိုဘားမားက လကျရှိဗိုငျးရပျစဈပှဲကွီးကို ဆငျနှဲနတေဲ့ ကနျြးမာရေးလုပျသားတှကေို “အရာရာကိုပေးဆပျခွငျးအတှကျ”ခြီးကြူးပွောဆိုခဲ့ပွီး အမရေိကနျလူမြိုးအခငျြးခငျြး ကိုယျခငျြးစာတရားထားပွီး ကူညီဖို့တိုကျတှနျးခဲ့ပါတယျ။ လကျရှိအမရေိကနျမှာ လူဦးရေ ၄သိနျး၆သောငျး၂ထောငျ ကြျောဗိုငျးရပျဈကူးစကျခံထားရပွီး လူ၁၆၅၀၀ ထိသဆေုံးနတောဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုအမရေိကနျတှေ အထိနာနခြေိနျမှာ တရုတျကတော့ ကမ်ဘာပတျပွီး ကယျတငျရှငျ နရောကို တကျလာနပွေီဖွဈပါတယျ။ စူပါပါဝါအမရေိကနျဟာ သူ့နရောကို တရုတျကို ပေးရမလားဆိုတာတော့ စိတျဝငျစားစရာကောငျးလာနပွေီလညျးဖွဈပါတယျ..
အထိနာနေတဲ့ အမေရိကန်အတွက် အိုဘားမားပေးတဲ့အကြံ၊ ကယ်တင်ရှင်တရုတ် နဲ့ အမေရိကန်စူပါ ပါဝါနေရာက ဆင်းပေးရမလား?
အမေရိကန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ပိုမိုမြင့်မားလာနေတာပါ။ ဒီလို ဗိုင်းရပ်စ် အန္တရယ်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာပဲ အမေရိကန်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလည်း ဆက်တိုက်ကျဆင်းနေတာပါ။ လက်ရှိ အမေရိကန် ဗိုင်းရပ်စ်အခြေအနေနဲ့ပက်သက်လို့ အရင် သမ္မတဟောင်း ဘားရက်စ် အိုဘားမားက ကြာသပတေးနေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့Virtual Meetingမှာ မြို့တော်ဝန်နဲ့အဖွဲ့ကိုအကြံအချို့နဲ့သတိပေးစကားတချို့ပေးခဲ့ပါတယ်။
အခုလိုမိုးထဲရေထဲ ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးဆုံးက ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေထဲက သတင်းမှားတွေ ဖြန့်နိုင်တယ်ဆိုတာပါ။ ဒီသတင်းမှားအချက်အလက်မှားတွေဟာ ခေါင်းဆောင်းပိုင်းတွေသာမကဘယ်သူကမဆိုပြန့်စေနိုင်ပြီး ဒါကိုထိန်းချုပ်ဖို့လည်းတော်တော်ခက်ခဲနေတာပါ။ ဒီသတင်းမှားတွေကြောင့်အခြေအနေပိုဆိုးသွားမှာကိုအိုဘားမားစိုးရိမ်နေပုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သမ္မတဟောင်းအိုဘားမားက လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး
(၂) အခြေအနေတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဖို့
(၄)ရှေ့မှာဆက်ဖြစ်နိုင်မယ့်အရာတွေကို လူတွေကိုစာနာစိတ်နဲ့ပြောပြထားဖို့”လိုတယ်လို့ အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာ မြို့တော်ဝန်နဲ့အဖွဲ့ကို အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။
WHOက ကမ္ဘာ့ကပ်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့တာတောင် အမေရိကန်ဟာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို လျော့တွက်ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အားနည်းတယ်ဆိုတာ လတ်တလော အသေအပျောက်နဲ့ကူးစက်နှုန်း အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ အမေရိကန်အခြေအနေကို ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့် အိုဘားမားက မြို့တော်ဝန်ကို အကြံပေးတွေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေများများခေါ်ထားဖို့လည်း အကြံပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေများများရှိလေ အရှက်ရစရာတွေ နည်းသွားလေဖြစ်ပြီး တုံပြန်မှုတွေကလည်းပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ အိုဘားမားကဆိုပါတယ်။ ဒီစကားတွေက Bloomberg’s groupရဲ့၎ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှာ အိုဘားမား ပြောကြားခဲ့တာတွေပါ။ ရှေ့၂ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာတုန်းကလည်း ဘီကလင်တန်နဲ့ ရှေးသမ္မတ George W. Bush တို့လည်းပါဝင်ပြီး စကားပြောခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကတည်းက Social Distancingလုပ်ဖို့ အိုဘားမားကတိုက်တွန်းခဲ့ပေမယ့် အစိုးရပိုင်းက လေးလေးနက်နက်လုပ်ဆောင်မှုမရှိတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေကလည်း ပေါ့ပေါ့လျော့လျော့ အပျော်မပျက် နေခဲ့ကြပါတယ်။ ခုချိန်ထိလည်း လူအုပ်စု အုပ်စုဆိုတာတွေရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်..
နောက်ပြီး သမ္မတဒေါနယ်ထရမ့် က ဗိုင်းရပ်စ်ကို ထိထိရောက်ရောက် တုံ့ပြန်ဖို့ထက် စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြန်လုပ်ဖို့စိတ်စောပြီး ဒါလုပ်ဖို့ပဲဆန္ဒရှိနေတာပါ။ အိုဘားမားကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကို လေးလေးနက်နက် ကာကွယ်ပေးဖို့ အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ လက်ရှိအချိန်ထိ ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကို ထိထိရောက်ရောက်ဟန့်တားနိုင်ခြင်းမရှိပဲ စောင့်ကြည့်ခြင်း စစ်ဆေးခြင်းတွေကို တိုင်းပြည်ရဲ့ နေရာအားလုံးကို မဖြန့်ကျက်နိုင်သေးပါဘူး။
အိုဘားမားရဲ့အကြံတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ထရမ့်ကလည်း မကျေမနပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ မီဒီယာတွေကတော့ အိုဘားမားအကြံတွေအတိုင်း သတင်းမှန်တွေစီးဆင်းဖို့နဲ့ တင်းကြပ်တဲ့စည်းမျည်းတွေချဖို့လိုတယ်လို့လည်း ရေးသားကြပါတယ်။
အမေရိကန်မှာ တစ်ရက်ကို လူ တစ်ထောင်နီးပါး သေဆုံးနေတာနဲ့ပက်သက်လို့ အိုဘားမားက”ထရမ့်အစိုးရရဲ့ တစ်ပတ်အတွင်းနာရေးစီးပွားရေးစံနှုန်း”ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုတွစ်တာမှာ ပြန်တင်ထားပြီး ထရမ့်အစိုးရကို တိုက်ရိုက်မဝေဖန်ပေမယ့်သွယ်ဝိုက်ဝေဖန်တဲ့စကားလုံးတွေ တွစ်တာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ကျရှုံးမှုတွေအတွက် ပြည်သူတွေအနေနဲ့အစိုးရကို Vote လုပ်ကြဖို့နဲ့ ခုလိုဖြစ်ရတာ WHOရဲ့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကမ္ဘာ့ကပ်ဆိုတာကို ငြင်းဆန်ခဲ့တဲ့သူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်နာမည်တပ်မပြောခဲ့ပါဘူး။
မြို့တော်ဝန်ကိုပေးခဲ့တဲ့ အိုဘားမားရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့အကြံတွေကထရမ့်ထက်စာရင် မှတ်သားစရာကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတည်းက Social Distancingကို အမေရိကန်တွေ စနစ်တကျလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမေရိကန်တွေက ဗိုင်းရပ်စ်ကို လျော့တွက်ခဲ့တဲ့ အတွက် လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာပိတ်သိနိးခဲ့ရသလို အလုပ်လက်မဲ့တွေ သန်းနဲ့ချီဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အိုဘားမားကဒီလိုတွေ သတိပေးပေမယ့် အမေရိကန်ဟာ ကူးစက်နှုန်းအမြင့်ဆုံးနဲ့ တစ်ရက်ကို လူဦးရေ ၉၀၀ကျော်လောက်သေဆုံးနေဆဲပါ။ အိုဘားမားက လက်ရှိဗိုင်းရပ်စစ်ပွဲကြီးကို ဆင်နွှဲနေတဲ့ ကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေကို “အရာရာကိုပေးဆပ်ခြင်းအတွက်”ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပြီး အမေရိကန်လူမျိုးအချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာတရားထားပြီး ကူညီဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိအမေရိကန်မှာ လူဦးရေ ၄သိန်း၆သောင်း၂ထောင် ကျော်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရပြီး လူ၁၆၅၀၀ ထိသေဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအမေရိကန်တွေ အထိနာနေချိန်မှာ တရုတ်ကတော့ ကမ္ဘာပတ်ပြီး ကယ်တင်ရှင် နေရာကို တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ စူပါပါဝါအမေရိကန်ဟာ သူ့နေရာကို တရုတ်ကို ပေးရမလားဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်.
ရုရှားနဲ့ ယူကရိနျး စဈပှဲဖွဈပှားနခြေိနျမှာ ယူကရိနျးနိုငျငံသား အမြားအပွား စဈပှဲအတှငျး အဖကျဖကျမှ ဖိအားတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ ဒီအပွငျ ရုရှားက ဆကျလကျ ကြူးကြျောနတောကွောငျ့ စဈပှဲဇုနျအတှငျး ဆကျနရေနျ သူတို့ကလေးတှရေဲ့ ဘဝအတှကျ အခကျခဲဆုံးသော ရှေးခယျြမှုမြား ပွုလုပျရနျ...
Olivia Farnsworth ဆိုတဲ့ကောငျမလေးရဲ့ ဖွဈရပျက သမိုငျးတဈလြှောကျ အံ့သွစရာ အကောငျးဆုံး ဖွဈရပျတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ ဗွိတိနျမိနျးကလေး Olivia Farnsworth ဟာ ဆာလောငျမှု၊ နာကငျြမှုကို မခံစားရတဲ့ UK နိုငျငံက မိနျးကလေးတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမကို...